Nokia 5.1, Nokia 3.1 na Nokia 2.1: Nkọwa, ọnụahịa na mwepụta | Androidsis
Nokia 5.1, Nokia 3.1 na Nokia 2.1: Ọkara ntanetị ọhụrụ nwere ihuenyo 18: 9
Nokia haziri mmemme na Moscow nke ha wepụtara ụfọdụ ngwaahịa ọhụrụ ha. Ndị a bụ ekwentị ọhụrụ atọ ga-erute ọkwa etiti na ntinye ụlọ ọrụ ahụ. Akụkụ nke ika a na -ere nke ọma yana nke ha nwere olile anya iji ụdị ndị a sie ike. Ha bụ Nokia 5.1, Nokia 3.1 na Nokia 2.1.
Uru dị ukwuu nke ekwentị bụ na ha na -enye anyị ụdị gam akporo dị ọcha, abụọ n'ime ha na -eji Android One na Android Go ọzọ. Na mgbakwunye, ha na -etinye nzọ na ihuenyo 18: 9. Agbanyeghị na anyị na -ahụkwa atụmatụ ndị ọzọ dịka NFC n'ime ha. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịtụ anya n'aka Nokia 5.1, Nokia 3.1 na Nokia 2.1 ndị a?
Anyị ga -ekwu maka ekwentị atọ a n'otu n'otu n'okpuru. Ka anyị wee mara ihe niile gbasara etiti ọhụrụ a nke akara Finnish. Ị dịla njikere ịmara ngwaọrụ ndị a?
1 Nkọwa Nokia 5.1
2 Nkọwa Nokia 3.1
3 Nkọwa Nokia 2.1
Nkọwa Nokia 5.1
Ụdị nke mbụ a Enwere ike ịkọwa ya dị ka nke kachasị ike n'ime ụlọ ọrụ atọ gosipụtara na Moscow. Ọkara etiti nwere ezigbo ọmarịcha yana atụmatụ nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịmasị. Yabụ na o nwere ikike ịre ahịa nke ọma n'ahịa. Ndị a bụ nkọwapụta nke Nokia 5.1:
Ihuenyo: 5.5 sentimita asatọ na nha 18: 9 yana mkpebi FullHD + (2160 x 1080)
Nchekwa nke ime: 16 / 32GB gbasaa na microSD
Android One (gam akporo 8.1 Oreo)
Igwefoto n'azụ: 16 MP nwere oghere f / 2.0 na ọkụ ọkụ ihu abụọ
Igwe n'ihu: 8 MP
Ndị ọzọ: micro-USB, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, jaak 3.5, onye na-agụ mkpịsị aka, NFC ...
Batrị: 2970 mAh.
Ihe nlele: 151.1 x 70.73 x 8.27mm
Agba: Blue, ọla kọpa na nwa
N'ozuzu anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ezigbo ihe nlereanya maka oke ya. Kedu ihe ọzọ, O nwere nkọwa dịka ihe mmetụta mkpịsị aka na NFC, nke na -eme ka ọ bụrụ ihe na -atọ ụtọ karị. Na mgbakwunye na inye ndị ọrụ nwere mmasị na ya ohere ndị ọzọ. Nokia na -agba nzọ na ihe mmetụta mkpịsị aka, mgbe anyị na -ahụ ọtụtụ ụdị na -ama n ihu ihu na ọ bụghị onye na -agụ ya.
Nkọwa Nokia 3.1
Ụdị nke abụọ a bụ mmeghari ohuru nke Nokia 3. Ọ bụ ihe nlereanya nke dị n'etiti atọ n'ime usoro nkọwa. Ụdị dị mfe karịa nke ụdị gara aga, ebe ọ bụ na ha nwere akụkụ ụfọdụ jikọrọ. Nke a bụ nkọwa nke Nokia 3.1:
Ihuenyo: 5.2 sentimita asatọ nwere mkpebi HD + yana nha 18: 9 na iko Corning Gorilla.
Onye nhazi: MediaTek MTK6750
Nchekwa n'ime: 16 / 32GB (Enwere ike ịgbasa ruo 128 GB na microSD)
Igwefoto na-esote: 13 MP nwere oghere f / 2.0
Ndị ọzọ: micro-USB, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, jaak 3.5, NFC ...
Batrị: 2.990 mAh.
Ihe nlele: 146.25 x 68.65 x 8.7mm
Agba: Blue + Copper, Black + Copper, White + Silver
Modeldị dị mfe, mana ọ bụkwa otu n'ime ihe na -atọ ụtọ. Nhazi ahụ na -edobe nzọ ya na bezels dị gịrịgịrị na ihuenyo. Kedu ihe ọzọ, ọ nwere NFC ọzọ nke mere na ndị ọrụ nwere ike iji ekwentị ha kwụọ ụgwọ. A na -atụkwa anya ahụmịhe onye ọrụ dị mma n'ihi ọnụnọ Android One na ngwaọrụ ahụ.
Nkọwa Nokia 2.1
N'ebe nke atọ na nke ikpeazụ anyị na -ahụ ihe nlereanya kachasị mfe nke atọ nke ika ahụ gosipụtara. Ọ bụ ọkwa ọkwa karịa ọkwa etiti. Ihe ekwenyela mgbe ahụla na ngwaọrụ ahụ ga -eji gam akporo Go dị ka sistemụ arụmọrụ. Agbanyeghị na ọ na -akwado nzọ ụlọ ọrụ ahụ ka ọ jiri ụdị dị ọcha nke gam akporo. Nke a bụ nkọwa nke Nokia 2.1:
Ihuenyo: 5.5 sentimita asatọ na nha 16: 9 yana mkpebi HD (1280 x 720) nwere iko 2.5D.
Nchekwa n'ime: 8 GB (enwere ike ịgbasa ya na microSD)
Gam akporo Oreo Go Edition
Igwe n'ihu: 8 MP nwere Flash ọkụ
Ndị ọzọ: micro-USB, GPS, Wi-Fi, Bluetooth
Batrị: 4000 mAh
Ihe nlele: 153.6 x 77.6 x 9.67mm
Agba: Blue + ọla kọpa, acha anụnụ anụnụ + ọlaọcha ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ + isi awọ
Ọ bụ ihe kachasị mfe nke atọ, ọ bụ ezie na ọ na -adọta mmasị maka nnukwu batrị ya. Ọ na -ekwe nkwa n'ezie inye ndị na -azụrụ ngwaọrụ ahụ nnwere onwe dị ukwuu. Ma ọ bụghị ya, ọ bụ ụzọ mbata ọdịnala mara mma, yana n'usoro imewe. Ọ bụ ihe ịtụnanya ole na ole, mana ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ na obere mmefu ego.
Modelsdị nke ọ bụla ga -enwe mwepụta dị iche, dabere na ihe ụlọ ọrụ n'onwe ya mere ka amara na emume a na Moscow. Na ihu ọma, anyị nwere ozi maka ọnụahịa na ụbọchị mwepụta maka ụdị nke ọ bụla. Ozi ndị ọrụ ji echesi ike.
Nke mbu anyi nwere Nokia 5.1, nke ga -ada n'ahịa n'ime ọnwa Julaị. Agbanyeghị na enweghị ụbọchị akọwapụtara, mana n'ime ihe karịrị otu ọnwa ọ ga -abanye ụlọ ahịa. Ọnụ ahịa ya ga -adị 189 euro, dị ka ụlọ ọrụ ahụ siri gosi.
N'aka nke ọzọ anyi nwere Nokia 3.1 nke ọnụ ahịa ya ga -abụ euro 139, n'ụdị ya dị mfe. N'okwu a, a ga -ebido ngwaọrụ a n'ahịa na June a. Yabụ na ọ ga -abụ n'izu ole na ole ọ ga -adị n'ọtụtụ ahịa.
Ikpeazụ ụdịdị ahụ bụ Nokia 2.1, nke ewepụtara na July. N'okwu a, ọ bụ nke kachasị ọnụ ala, yana a ọnụahịa nke 115 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nokia 5.1, Nokia 3.1 na Nokia 2.1: Ọkara ntanetị ọhụrụ nwere ihuenyo 18: 9